ग्यासको मूल्यमा बृदी, पेट्रोलिय पदार्थको प्रति लिटर एक रुपैया कम ! | Prabhavkari News
ग्यासको मूल्यमा बृदी, पेट्रोलिय पदार्थको प्रति लिटर एक रुपैया कम !
काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपी ग्यासको मूल्य बढेको भन्दै निगमले सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु २५ ले वृद्धि गरेको हो। यससँगै ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर रु एक हजार ३ सय ७५ पुगेको छ।
निगमले ‘पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१’ अनुसार प्रत्येक १५÷१५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। भारतीय आयल निगमले प्रत्येक अङ्ग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखमा पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची पठाउँदै आएको छ।
मूल्य समायोजन पश्चात भारतमा भन्दा नेपालमा इन्धन मूल्य सस्तो छ। वीरगन्ज नाकामा इन्धनको मूल्य भारतको रक्सौलमा कायम पेट्रोलको बिक्री मूल्यभन्दा प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ४० पैसा र डिजलको मूल्य प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ २७ पैसा सस्तो रहेको निगमले जनाएको छ।
नबिल बैकले घर बनाउन दिने भयो ७.९९ प्रतिशतमा ब्याजदरमा कर्जा
दमकमा एकसातामा दालको मूल्य १ केजीमा ३० देखि ५० रुपियाँ बढाईयो, भाउ नबढेको चीज छैन
दमकमा ब्यवसायीक, सामाजिक र सहकारीको क्षेत्रमा जम्दै खेम सापकोटा